Semalt waxay muujinaysaa siraha si ay u sii wadaan shirkadaha waaweyn ee Gargaarka SEO
Marka ay timaado raadinta gawaarida organic-ka ah waxaad arki doontaa googlewaxay jecel yihiin noocyada waaweyn. Noocyadaasi waxay ku qaataan tobanaan kun oo doolar iyagoo aan indhaha ku haynin. Isla sidaas looma sheegi karo wax yarGanacsiyada: Waxay ku faafaan miisaaniyadda iyo shaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, waxay (ganacsiyada yaryar) heli karaan gabal ka mid ah keegga iibka dabiiciga ahayaa sidoo kale Google.
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital, Nik Chaykovskiy waxay wadaagaan siraha si ay u gaaraan heerarka sarre ee raadinta raadinta, taas oo kaa caawin doonta inaad tartantooo leh shirkado waaweyn.
# 1: Qaado liistada hantidaada SEO
Haddii aad ganacsi ku jirtay wakhti (oo aad leedahay adoo raacayadib ugu soo noqosho horaantii sannadkii 2000 ama xitaa 90s) kadibna waxaad ku fadhidaa miino dahab ah. Ha u jihaysnayn inaad ka fogaato magacii hore ee faafaahinta URLama xeeladaynta SEO. Waxaa laga yaabaa in ay dib u dhacdo. Rumayso ama ha'ahaatee, Google waxay door bideysaa doorashooyinka hore oo ay u muujinayso in ganacsigu yahay mid xasilloonlagu kalsoonaan karo. Isticmaal Google Analytics si aad u ogaato boggaga ka baxsan ee bogga, boggaga lagu eegayo 3 daqiiqo ama ka badan, bogag iyo blogs leh wax badantaraafikada. Taasi waa tan, kuwani waa qiimo u gaar ah booqdayaashaada internetka si ay kuu sameeyaan bartilmaameedka SEO ugu fiican.
# 2: Ka hel website-kaaga muuqaal ahaaneed
Ka hor intaadan bilaabin lacag kuugu ololeynta SEO, sameehubi in boggagaaga ku xiran yahay Google si sax ah. Hagaha Webmaster-ka Google ayaa halkan ku soo galaya. Waxay kaa caawin doonaan inaad garato waxawaa in la hagaajiyaa.
# 3: Qeex garaynta qorshaha dheer ee muhiimka ah
Ha isku dayin inaad la tartanto noocyo waaweyn oo ku qoran ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah.Waxaad lumin doontaa. Bedelkeed, isku day in ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah (jumlado dheer oo leh khasaare sare oo isbedel ah). Ha iloobin in qashinkaTirooyinka taraafikadu way ka hooseeyaan marka la barbar dhigo 'ereyada' weyn 'keywords', waxaad u taagan tahay fursad weyn oo aad u rogi lahayd gaadiidkaaga iibinta.Iska ilaali. Isticmaal xariiro toos ah si toos loogu wado gawaarida websaytka leh halbeegyo isbedel weyn. Halkan, samee dalabyo martidaadama diidi karto ama buuxin kartaa foomka oo meel dalbana. Waxay u shaqeyn doontaa sixirka.
# 4: Dhismo olole SEO ah oo ku saabsan suuq-geynta suuq-geynta
Waxaa jira hal degaan oo yaryar oo yaryar ay garaacaan kooxda ugu weynsuuq geynta Soo saarista tayada sare ee kaqeybgalka bogga waa hawl ay tahay magaca ugu weyn ee inta badan wakiil ka ah. Marka aad wax ka qoreyso ganacsigaaga,mawduucuna wuxuu noqon doonaa mid madaxbannaan oo tani waa wax ay ku qoran yihiin blogs iyo bogag kale oo ku saabsan jacaylkaaga. Ha la yaabinhaddii ay ku daraan isku-xireyaasha xiriirka ah (si aad u heshid boggaaga) sidaas darteed kor u qaadista taraafikadaada.
Qorshee iyo jadwalka wakhtiga abuurista jibbaarada adiga kugu habboonsuuqa bartilmaameedka. Samee fikradahaaga oo aad aad u badan tahay inaad soo saarto xiisaha. Iska hubi inaad ku dartey xiriiro firfircoon oo dib u habeyn ahgaadiidkaaga boggaaga. Waqtiga oo dhan, Google wuxuu aqoonsanayaa dadaalkaaga wuxuuna kugu abaalmarin doonaa muuqaal weyn.
Qoritaanka wax weyn oo qayaxan waxay qaadataa waqti laakiin dadaalkawaxay mudan yihiin wakhtiga la qaatay. Dhanka kale, hubso in website-kaaga si fiican loo xoojiyo. Dhiirigelinta ma aha oo kaliya waxtarka SEO, laakiin sidoo kalewaxay ka caawisaa inay ka farxiso macaamiishaada mustaqbalka iyo hadda. Tusaale ahaan, websaydhada degdega ah iyo bogagga la safri karo waxay yareyn doonaan heerka xaddiga xaraashka. Wanaagsan sii wad Dhaqanka SEO halkii ay abuuri lahayd website-ka oo ay sii hayn karto Source .